Munaasabad lagu dooranayay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe ayaa ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboledka Hirshabelle.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ay ka mid ahaayeen kusimaha Madaxweynaha Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise,wasiir ku xigeenka ganacsiga iyo warshadaha Hirshabelle Maxamed yuusuf Colow iyo mas’uuliyiin kale ayaa cod aqlabiyad leh loogu doortay gudoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe Ceydiid Maxamed Cabdulle kadib markii uu tanasulay musharaxii la tartamayay.
Ganacsade Ceydiid Maxamed oo ka hadlay doorashada kadib munaasabadan ayaa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono ganacsiga gobolka uuna keeni doono xuquuqda ka maqan ganacsatada gobolka.
“Dadaal weyn ayaan u galayaa xuquuqda ganacsatada gobolka anigoo u caddaalad fali doono ganacsiga gobolka.”ayuu yiri Ceydiid Maxamed Cabdulle.
Wasiir ku xigeenka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Yuusuf Colow ayaa kula dardaarmay Ceydiid inuu wax ka qabto howlaha ganacsatada gobolka.
“Waxaan u hambalyeynayaa ganacsadahan muujiyay dadaal xoog leh isla markaan la doortay waxaana aan kula dardaarmayaa inuu xilka loo doortay si wanaagsan uga soo baxo,”ayuu yiri Wasiir ku xigeenka ganacsiga Hirshabelle.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabadan ka hadashay guddoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabelle Marwo Canab Axmed Ciise.
“Xilkan laguu doortay waa inaad ganacstada joogta baadiyaha iyo kuwa jooga magaalada aad u caddaalad fashaa, weliba haweenka waa inay helaan caddaalad.”ayay tiri Marwo Canab Axmed Ciise oo ah kusimaha Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle.
Previous Xildhibaan Ka Tirsanaa Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Geeriyooday
Next Maamulka Hir-Shabeelle oo ka hadlay dagaalka Magaalada Jowhar